XOG RASMI AH: Hoggaamiyaasha Dawlad gobaleedyadu miyay ku kulmayaan dalka Kenya? – Puntlandtimes
June 11, 2019 W LAASCAANO
NAIROBI(P-TIMES)- Warar kala duwan oo soo baxaya ayaa sheegaya in madaxda dawlad gobaleedyada Soomaaliya ay isku diyaarinayaan kulan ay Beesha Caalamka kula yeelan doonaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, kalana hadli doonaan is haysiga u dhaxeeya iyaga iyo dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Wararku waxay sheegayaan in si kali-kali ah ay madaxda dawlad gobaleedyadu ula kulmi doonan wakiilada caalamiga ah, ka dibna uu jiri doono kulan ay wadajir ula yeelan doonan eragada caalamiga ah.
Ergayga gaarka ah ee QM u soo magacowday Soomaaliya ayaa todobaadkan shaqada la wareegi doona, wuxuuna ku beegmay waqti xasaazi ah oo ay dhinacyadu is hayaan.
Madaxda dawlad gobaleedyadu waxay ka welwelsan yihiin hab dhaqanka madaxda dawladda Federaalka oo ay sheegeen in ay gabi ahaanba inkireen awoodaha dastuuriga ah ee dawlad gobaleedyada.
Jubbaland, Puntland iyo Galmudug waxay joojiyeen wada shaqeyntii kala dhaxaysay dawladda Federaalka oo ay sheegeen in ay howlihii dalkaba isku koobtay taas oo uusan ogoleyn Dastuurka KMG ah ee Soomaaliya.
Madaxda dawlad gobaleedyadu waxay kujiraan dagaal adag oo ay lagalayaan Farmaajo iyo Kheyre oo isku arkay in ay yihiin kuwa taladdu iyaga ka bilaabato kuna dhamaato.
Horjoogayaasha Gobolada waxaay caqabad ku yihiin dhismaha dowladnimada Soomaaliya iyo xasiloonida soomaaliya.
Waxaay doonayaan habdhaqankii ku dhisnaa daneysiga, waxa ummadda Soomaaliyeed ka dhexeeya oo la bililiqaysto.
Marnaba ma doonayaan in dadka Soomaaliyeed helaan Dowladnimo ay hoosteeda harsadaan waayo jiritaanka Dowladnimo wuxuu la mid yahay GEED harweyn oo Qoraxda iyo kuleylka laga galo.
Waayo haddaan Nadaam Dowladnimo jirin Qarannimo ma jireyso.
Qarannimada waa astaanta, muqaalka jiritaanka waddan leeyahay, qaranku u taagan yahay jiritaanka magac muunad leh, laga tixgeliyo dunida oo dhan ee ummad leedahay.
Soomaaliya waxaa ka dhacay isbedel markii la doortay Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo, si uu isbedelkii u dhaqan galo waxaa ka hor yimid Kooxo iskugu jira wejiyo badan laakiin kuligood waxaay ka soo horjeedaan dowlad micna leh iney ka shaqayso soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ee maantay jirta waa dowlad ka mug weyn Dowladihii ka horeeyey, marka dhinac kastaba laga eego.
Kooxaha dib u socodka ah waxaay dhibsadaan iney maqlaan wax ka duwan habdhaqankooda ay ku ilaashadaan danahooda gaarka ah, had iyo jeerna waxaay u adeegaan dowlado shisheeye oo doonaya iney Soomaaliya ka boobaan khayraadkooda iyagoo doonaya iney dadyoowgooda uga faa’iideeyaan.
Laakiin damiir laawayaal badan oo Magaca soomaaliya sheegta ma ahan kuwo ka fekeraya danta guud ee ummadda Soomaaliyeed.
Tusaale Emirates ka Dekadaha ay hadda u gacan geliyeen kuwo liita ee kala jooga Hargeysa iyo Garoowe, waxaa laga saxiixday ugu yaraan 30 Sano, bal intaas eeg ma waxaan dhahnaa waa horumin dhaqaale bay u keeneysaa dadka degaanka iyo dalkaba, mase feker ka soo horjeeda horumarka iyo mustaqbalka dadka Soomaaliyeed kuwa hadda jooga iyo kuwa dhalan doona.
Emirates ujeedkoodu waxaay ku ilaashanayaan Dekadahooda, waayo haddii ay Dekadaha soomaaliya helaan horumarin waxaay ka cabsi qabaan iney Dekadaha Emirates ka ay suuq waayaan, marka Su’aashu waxaay tahay nin sidaa u fekeraya inuu ka raali noqdo horumarkaaga kuna yiraahdo Dekadahaaga ayaan kuu Maal gelinayaa taas caqligaa Bini-aadnimka ayaa diidey.
Kenya arrinteedu waa loo wada jeedaa, haddana Kooxaha dib u socodka waxaay garab taagan yihiin Kenya.
Dahir Nur. Sxb hal meel ayaad wax ka eegtay. DFS iyada ayaa Dastuurka ku tumanaysa. Farmaajo Maalinta la doorto ilaa & iminka wuxuu dagaal kula kijraa Dowlad Goboleedyada. Runtii constitution-kii wadanka wuu iska Indo tray wuxuuna u soo diyaar goroobay dagaal. Sharcigii wuu tuuray lakin isna waa la tuuri.
Walee waa musiibo,fatooshland,habarkuleeyland,cirfiidland,qaxarland,qalfoofland miyaney ahayn (QAYBI OO XUKUN)
HALCALAN HALDIIN HALWADAN SOOMAALI waxka hooseeya waa gunimo iyo gumaysiye diida! aqabalimayno! DHULKA HOOYO DHUL CIR iyo BAD waa in la ilaaliyaa.
Daahir Nur, mahadsanid adeer SIDAAD wax u dhigtay WAA runti & garashadi fiyoobeed. WBT
Uhuru Kenyatta waa nin habowsan WUXUU iska dhaadhiciyay MAADAAMA ay Somalia maanta kala daadsantahay BOOB oo ka faaidayso (waa sida noo muuqate) BALSE Uhuru wuxuusan ogayn in uu jiro eray ay Somalidu u nugushahay (Laalays mooye) oo hadday maqasho AY FAR KALIYA NOQON kasoo ah; “YAA SOMALI AHEY!!!. WBT